युकेमा नेपाली विद्यार्थीका लागि पार्ट टाईम जब सहितको अध्ययन अवसर - Onlinesamaya.com
युके पढान जानो विद्यार्थीको संख्या दिनदिनै बढदै गईरहेको छ । युकेको अध्ययानका लागि नेपालका परामर्श शैक्षिक संस्थाले राम्रो र भरपर्दो जानकारी गराईरहेका छन । यस सम्बन्धमा सौजन्य मिडियाका कार्यक्रम निर्देशक सुनिल आर्चायले मोटिफ एजुकेसन अब्रडका फाउन्डर सिईओ उमेश पाण्डेसँग गरेको गरेको कुराकानी :
विद्यार्थीले युकेमा अध्ययानसँगै पार्ट टाईम काम गर्न सक्छन ?
अवश्य पनि, युकेमा धेरै विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले अस्पताल, एकेडेमिक युयटरिङ अर्थात विद्यार्थी युनियनका लागि काम रहेको अवस्था छ । विदेशी विद्यार्थीका लागि भने पुर्णकालिन रुपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । विद्यार्थीको पासपोर्टमा सामान्यतया १० वा २० घण्टा काम गनै पाउने भनेर तोकिएको हुनु पर्छ । यसका तपाईको विश्वविद्यालयले पनि कति घन्टा काम गर्ने भनेर मापदण्डको व्यवस्था गरेको हुन्छ पर्छ । यसो गर्नुको कारण तपाईको अध्ययानमा पनि प्रशस्त समय सर्मपित गरेको सुनिश्चित होस भनेर हो ।
युकेमा अध्ययान गर्ने विद्यार्थीका लागि लिभिङ कस्ट कस्तो रहेको छ ?
संख्या वा अंकका आधारमा भन्नु पर्दा युकेमा अध्ययान गर्ने विद्यार्थीको बसाई खर्च अमेरिकाको भन्दा ९लिभिङ कस्ट० ५।४४ प्रतिशत सस्तो रहेको छ । यसैगरी घरभाडा अमेरिकाको भन्दा २०।९७ प्रतिशत सस्तो युकेमा रहेको छ । अन्य अतिरिक्त खर्च भने विद्यार्थीमा भर पर्ने हन्छ । नेसनल युनियन अफ स्टुडेन्टका अनुसार युकेको लन्डनमा अध्ययान गर्ने विद्यार्थृका लागि १३,४०० पाउन्ड ९२१,८०० डलर० पर्न आउछ । यसलाई घर भाडमा तुलना गर्दा ईङल्यान्डमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा फरक रहेको छ ।
युनिर्भसिटी अफ कार्डडिफका अनुसार वेल्समा बस्ने विद्यार्थीको औषत लिभिङ कस्ट लगभग ७,३०० युरो ९अर्थात ९,२०० डलर० पर्न आउछ । यसैबिच युनिर्भसिटी अफ ईडिनवर्गको अनुमानित लागत स्कटलैन्डका लागि १५,४०० युरो हुन आउछ । कुईन्स् युनिर्भसिटी वेल्फास्टको अनुसार नर्थन आईरलैन्डमा अध्ययानका लागि अनुमानित लागत १०,२०० युरो अनुमान गरिएको छ । तपाईहरु युकेमा अध्ययान खर्चका बारेमा यहाँ थप जानकारी लिन सक्नु हुन्छ ।
नयाँ विद्यार्थीका लागि युकेमा होस्टेलको कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?
विदेशी विद्यार्थीका लागि व्यवस्था गरिएका बासस्थानका बमरेमा जानकारी लिने हो भने यहाँ आएर देखेपछि सोचे अनुसार नभएको पाउने अवस्था धेरै हुन्छ । तर धेरै विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको सहयोगका लागि क्याम्पसमा पहिलो वर्षका विद्यार्थीका लागि आफनै बस्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस्ता हल ९बस्ने कोठा० पैसाको लागि महत्व दिएर तयार गरिएका हुन्छन । आफनो आवश्यकता अनुसारका विभिन्न सुविधा भएका कोठाको व्यवस्था रहेको हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकता अनुसार सुविधाका सबै पहुचहरुमा विविधता रहको हुन्छन । कहिकहि सिंगल युजका र एक जनामात्र बस्ने सुविधा सहितका बाथरुम सुविधा सहितका कोठाहरु रहेका हुन्छन । यिनीहरुको भाडा अत्याधिक बढी रहेको हुन्छ । नीजि कम्पनीले संचालन गरेका बसाईका लागि निजी कोठा समेतको सुविधा रहेको हुन्छ ।
विद्यालयमा जस्तै होम गर्नु पर्ने हुन्छ ?
हो, अवश्य पनि । विद्यार्थीले कोर्सको तयारी कार्य र प्रोजेक्ट वर्क गर्नु पर्छ तर विद्यालय जस्तो कसैले तपाइको हात समाएर होम वर्क गर्नु भएन भने फेल हुन्छस भनेर भन्दैन । यहाँको विश्वविद्यालयको दैनिकीमा सबै भन्दा ठुलो चुनौती भनेको आपैm उत्प्रेरित भएर समयसँगै हिडनु हो । यसैगरी कुनै बिषयमा अल्झिएर अल्मलिएर लक्ष्यबाट बाहिर भने जाने सम्भावना पनि रहन सक्छ ।
कुनै विद्यार्थी अग्रेजी भाषा सुधारकै क्रममा रहेको बेला भाषा सिक्न सहयोग मिल्न सक्छ ?
सकिन्छ, विश्वविद्यालयले निधारण गरेको न्युनतम अग्रेजी भाषाको लेवल पुरा गरेको र तपाई भाषा सिक्ने क्रममा रहेको अवस्थामा यस्ता कोर्स लिन सकिने सम्भावना रहन्छ । तपाईको विश्वविद्यालयले भाषा सुधार गरी लेखाई, बोलाई र बुझने क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । यसै गरी अन्य भाषा सिक्ने समेत सुविधा रहेको हुन्छ ।
नयाँ विद्यार्थीको लागि कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु रहेका हुन्छ ?
युकेमा फ्रेसर शब्दले नयाँ ग्रेजुएट विद्यार्थीलाई जनाउछ, यस्ता विद्यार्थीलाई स्वागत कार्यक्र राखेर भर्ना शुरु गरिन्छ । यस्ता विद्यार्थीका लागि संगितिक कार्यक्रम, शैक्षिक मेला, कमेडी कार्यक्रम गरी क्याम्पसमा स्वागत गरिन्छ ।
परीक्षामा असफल हुने विद्यार्थीलाई के गरिन्छ ?
यदि वार्षिक परीक्षामा फेल भए, परीक्षामा पुन सामेल हुने मौका मिल्छ, तपाईको अंक ४० प्रतिशत ९थर्ड क्लास डिग्री० आएको अवस्थामा । यति गर्दा पनि फेल भए पुन सोही वर्षमा भर्ना हुनु पर्ने हुनु पर्ने हुन्छ । यसलाई छोडेर अर्को बिषय पनि लिन सकिन्छ । कोर्सवर्क एसाईनमेन्टले फेल भएर औषत ग्रेड नआउने सम्भावना रहदैन । यदि त्यसो भएपनि सफलताका लागि टिप्स र परामर्श लिन सकिन्छ ।
कक्षा लिने समय सिमा हप्तामा कतिसम्म रहेको छ ?
धेरैजसो ग्रेजुएट कोर्समा इङल्यान्ड, वेल्स र नर्थन आइरल्यान्डमा फुल टाईम को कार्सलाई ३ वर्ष निर्धारण गरिएको हुन्छ । स्कटलैन्डको नियम चाही ४ वर्षको रहेको छ । औषतमा भन्दा १५ देखी २५ घन्टा प्रति हप्ता अध्ययान गर्नु पर्ने हुन्छ । यतिनै समय भन्दा पनि पनि बिषय र संस्थामा अध्ययन घन्टा निर्भर रहेको पाईन्छ ।
फरक शारीरीक क्षमता भएका विद्यार्थीका कस्तो सहयोग रहेको छ ?
हो, ब्रिटिस युनिर्भसिटीले शारीरिका क्षमता फरक भएका विद्यार्थीहरुलाई बसाई, हेरचाह गर्ने, अध्ययानमा सहयोग गर्न कोअडिनेटरले तालिम दिने छन । साथै अन्य विभिन्न सुविधा रहेको पाईन्छ ।